GIF Gadzira Movavi, inowanikwa chete ma1,09 euros | Ndinobva mac
Mafaira eGIF fomati ave chimwe chezvishandiso zvinozivikanwa kwazvo kana zvasvika pakuratidza manzwiro edu, mamoods, maitiro ... PaInternet tinogona kuwana nhamba huru ye mawebhusaiti anotibvumidza isu kuti tiwane nhamba hombe yemafaira yerudzi urwu yenyaya ipi zvayo nyaya.
Asi, kana isu tisingakwanise kuwana iyo GIF yatinoda, tinogona kusarudza gadzira icho isu pachedu nekutenda kune akasiyana maficha izvo zvatiinazvo muMac App Store. GIF Mugadziri Movavi ndechimwe chezvishandiso zvakanakisa zvatinazvo muchitoro cheApple, chikumbiro icho kwenguva yakati wandei tinokwanisa kurodha chete ma1,09 euros.
Mumaminetsi mashoma uye nekutenda kune chishandiso ichi, tinogona ckurodha mavhidhiyo kubva kubhurawuza redu kana kuridza waunofarira multimedia uye gadzira iyo GIF iyo yatinozogona kugovana kuburikidza neyedu social network, Meseji, Teregiramu, Tsamba kana chero chimwe chikumbiro chinotibvumidza kugovana iyi mhando yefaira.
Iko kushanda kwekushandisa kuri nyore, nekuti kana tangoita iko kunyorera, isu tinongofanirwa kudaro sarudza nzvimbo yatinoda kunyora, ingave chikamu cheiyo skrini kana iyo skrini yese Gare gare, isu tinofanirwa kusarudza iyo ichave kutanga uye kupera kwekurekodha, yekupedzisira resolution yefaira uye nhamba yemafuremu pasekondi.
Uye zvakare, isu tinogona zvakare kusanganisira kufamba uye zviito zvegonzo, cheka vhidhiyo kuti ienderane nezvatinoda, shandura kutamba kwekumhanya ... zvese nekuda kweiyo intuitive interface yarinotipa. Ichi chishandiso Iyo ine mutengo wenguva dzose muMac App Store ye14,99 euros, asi kwenguva yakati rebei, kunyanya kusvika mangwana June 15, tichakwanisa kurodhaunirodha kungopfuura yuro imwe chete, kunyanya 1,09 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » GIF Gadzira Movavi, inowanikwa chete ma1,09 euros
Nyowani isina kufambiswa ine simba kumashure kwe macOS Mojave